dimanche, 16 août 2015 12:39
Sarim-bavy voaendaka : Silipo sisa no teny an-kodiny
Mpanao fanatanjahantena maraina amin’ny lalana mihazo ny «port Toliara» ao Tsimenatse III no nahitanan’ity tovolahy pelana tsy nisy afa-tsy silipo sisa teny an-kodiny. Raha ny fanazavany dia nisy telolahy nanendaka azy, raha iny handeha hody iny izy. Tratran’ny be noho ny vitsy ka tsy afa-nanohitra. Lasan’ireo mpanendaka ny volany 15 000 Ariary niampy finday iray ary hatramin’ny akanjo teny an-kodiny, ka tsy nisy afa-tsy takon-kenatra sisa navelan’ireo mpanendaka nentin’ilay sarim-bavy nody.
dimanche, 16 août 2015 12:37
AGOA : Hisokatra ny “AGOA resource Center”
Hisokatra tsy ho ela eto Madagasikara ny ivontoerana manokana hitrandrahana ny vaovao sy tahirin-kevitra momba ny AGOA na ny “AGOA resource Center”, araka ny nambaran’Atoa Scott Reid, tale mpanatanteraky ny AMCHAM (American Chamber of Commerce). Izany dia ezaka ataon’ny AMCHAM hampirisihina ny orisana Amerikana hampiasa vola eto Madagasikara, ary hampivelarana ny fifanakalozana ara-barotra eo amin’i Madagasikara sy Etazonia sy ny fahaiza-manaon’ny Malagasy. Hisy delegasiona mpandraharaha malagasy hanainga tsy ho ela ho any Las Vegas, Etazonia hamonjy ny tsenabe «Magic Sourcing» izay natokana ho an’ny mpandraharaha mpamokatra.
dimanche, 16 août 2015 12:35
Mahajanga : Telo mianaka nianjeran’ny tambobo, iray tapa-tongotra, zaza roa naratra mafy
Efa nampilaza ny mpivarotra manamorona ny tamboho ny tompon’ny orinasa mba hiala fa mety hampidi-doza. Nangatak’andro ireo mpivarotra, mba ho androany alahady no hiala, kinanjo tonga tampoka ny zoma hariva ny loza. Nianjera ilay tamboho. Telo mianaka no indray tototra tao. Ramatoa iray tapa-tongotra, naratra mafy kosa ny zanany roa. Tsaboina ao amin’ny hopitalin’i Mahajanga izy ireo.
dimanche, 16 août 2015 12:34
BEPC Antsirabe I : Nidina ny vokam-panadinana
Latsaka 1% miohatra ny tamin’ny taon-dasa ny vokam-panadinana BEPC Cisco Antsirabe I nivoaka ny sabotsy 15 Aogositra 2015. Nanodidina ny 48,45% izany raha toa ka 50% latsaka teo ny taon-dasa. Ny CEG Ambilombe no nandatsaka ny voka-panadinana ao Antsirabe I raha ny vokatra tamin’ireo foibem-panadinana satria 26% mahery monja no azon’ity sekoly ity raha nanodidina ny 50% mahery avokoa ireo sekolim-panjakana tao an-drenivohitr’i Vakinankaratra.
samedi, 15 août 2015 18:56
Nifandona tetsy amin'ny PK27.5, afaka kely an'Ambatofotsy, làlana mampitohy an'Antananarivo Toliara RN7 ny 4x4 Nissan Patrol iray tao anaty fiholanana, ka dia nivadika ilay sprinter nitondra mpandeha maro.Nisy naratra fa tsy nisy aina nahafoy, io tolakandro io.
vendredi, 14 août 2015 21:03
RN13 : Kamiao nivadika namono olona enina
Kamiao iray mpitondra entana sady nitondra olona no nitsoraka tany anaty hantsana tao Tanambao Tsiharoa Kaominina Ankaramena, amin’ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an'i Faradofay sy Amboasary Atsimo, ny harivan’ny alakamisy 13 aogositra tokony ho tamin’ny 7 ora. Olona 6 no namoy ny ainy, voatsindrin’ny entana. Maro no naratra ary misy tena voa mafy, ary ahiana ny ain’izy ireo.
vendredi, 14 août 2015 15:33
BEPC: Nidina ny taham-pahafahana
45,73 isan-jato ny taha-pahafahana teto Antananarivo, izay latsaka raha oharina tamin'ny taon-dasa.
vendredi, 14 août 2015 14:57
Fantatrao ve fa ?
Mandray ireo olona tratran'ny herisetra noho ny fanandevozana moderina koa nyVONJY.
vendredi, 14 août 2015 14:10
Misy mandrahoana i RAMAMONJISOA, mpikambana eo amin'ny SEMM (Sendikan'ny Mpiasa eto Madagasikara) noho ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny samy sendika.
lundi, 03 août 2015 13:16
Mitety ny isan-tokantrano ireo mpiasan'ny Ministeran'ny fahasalamana.